himon UniMon Font & keyboard apk ( for android ) phone
android phone တွေအတွက် Mon Font & Mon Keyboard သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Mon Font & Mon Keyboard သုံထားတဲ့ ဖုန်...
ဖုန်း application icon တွေကို မြန်မာစာပြောင်းနည်း
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖုန်း ရဲ့ application icon တွေကိုမြန်မာစာပြောင်းချင်ရင်အောက်ကလင့်မှာယူလိုက်ပါ... အလန်းလေးနော်... ...
လေးလံနေတဲ့ Android ဖုန်းတွေကို အထိရောက် ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးပေါ့ပါးအောင် စွမ်းဆောင်ပေး မယ် Extreme Speed v1.1 မိမိတို့ရဲ့ Android စ...
Frontline Commando D-Day (andriod game)
Frontline Commando D-Day ဂိန်းလေးကတော့ စွန့်စားခန်းတွေ နဲ့စစ်တိုက်ရတဲ့ ဂိန်းလေးပါ ဖိုင်ဆိုက်က နဲနဲ ကြီးတယ်ဗျ Frontline Commando D-D...
ဖုန်းနဲ့ ပါတ် ဖြောင့်၍ ဖုန်းခေါ်နည်းလေးပါ...။အသုံးလိုတဲ့သူသုံး နိုင်အောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ personal call, secret call အစရှိတဲ့ ...
ကွန်ပျူတာ အဘိဓာန် (APK) စုစည်းမှု မြန်မာဗာရှင်း
ကွန်ပျူတာ အဘိဓာန်ကို ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူများနှင့် အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာကို ယခုမှ စတင် လေ့လာသူများ အတွက် ရဥ၁်ရွယ်၍ ...
Wondershare DVD Creator 2.6.5.32 With Registration Code (အရမ်းလန်းတဲ့ ခွေ Burn ပေးတဲ့ကောင်လေး)
Wondershare DVD Creator လေးကတော့ အခွေ Burn ဖို့အတွက် အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ ဆောဝဲ တခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီ။ ...
Passport Photo Studio + Scrial
Passport Photo Studio လေးမရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဆောင်ထားလိုက်ပါနော်။ကျနော်တို့ Passport ရိုတ်ဖို့ ဓါတ်ပုံတွေကို Edit ပြုလုပ်တဲ့အခါ Pho...
Video Watermark Pro with serial key (video မှ မိမိလပ်စာနဲ့နာမည် ထည့်ချင်သူအတွက်)
Video Watermark Pro က သီချင်းတွေ ဗီဒီယိုတွေကို မိမိ လို ချင်တဲ့ စာထည့်လို့ရတဲ့ဆော ၀ဲ လေးပါ ..။ လိပ်စာထည့်ပြီးရင်လည်း ဖိုင် fo...
ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် ချင်သော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် CyberLink PowerDirector 10 Full Crack လေး ပါ။ မိမိရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်း ၊...
02:50 photoဆောဝဲများ, ဆောဝဲများ 1 comment
Passport Photo Studio လေးမရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဆောင်ထားလိုက်ပါနော်။ကျနော်တို့ Passport ရိုတ်ဖို့ ဓါတ်ပုံတွေကို Edit ပြုလုပ်တဲ့အခါ Photoshop နဲ့ Passport ပုံတွေကို ပြုလုပ်ကျပါတယ်။
Photoshop ကျွမ်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအဖို့ Photoshop နဲ့ Photo တွေကို ၁၂ ပုံ တို့ ၈ ပုံတို့ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။မကျွမ်းကျင်တဲ့ ညီအကိုများကျတော့ တိုင်ပတ်တာပေါ့ဗျာ။အဲတော့ Passport Photo Studio လေးကိုသာဆောင်ထားဗျာ။
02:35 ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲလ်, ဆောဝဲများ 1 comment
>>>>>>Download Wondershare DVD<<<<<<
RAR Extract Password - www.nyanmon.com
Camera360 Ultimate v 4.8.1 for android (12,18,2013) UpDate ရေလည်လန်းတဲ့ Camera လေးပါ
02:31 andriod ဆိုင်ရာ, andriod ဆောဝဲ No comments
Android phone/Tablet အသုံးပြုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ ရှိသူတွေ အတွက် 12,18,2013 နေ့ထွက် Camera360 Ultimate v 4.8.1 for android ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
Camera ဆော့ဝဲလ် အကြောင်း ပြောမယ် ဆိုရင် Camera360 Ultimate က မပါမဖြစ်လို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ် ။။။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက လူဦးရေ သန်း 90 ကျော်အသုံးပြုနေတဲ့ .ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက ပုံတစ်ပုံကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ့် camera effect and features တွေ ပါလို့ပါပဲ။
photography mode6မျိုးကို လိုသလို နှိုက်ထုတ် သုံးစွဲနိုင်ပြီး တခါမြင်ရုံနဲ့ တစ်သက်စွဲအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်ကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရူပါအခြေအနေ ဂွမ်းနေတဲ့ (မိန်းကလေး ၊ ယောက်ျားလေး ）တွေ အလန်းစားဖြစ်အောင် တော် တော် များများသုံးတဲ့ ဆော့ဝဲလ် တစ်ခုဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး… ဒါအပြင်လှပ ဆန်းသစ်တဲ့ beautiful effects များစွာ ပါဝင် သုံးစွဲခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်ရင် scences လေးတွေကို ပါ လက်စွမ်းပြကာ ပေါင်းထည့်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.. သုံးစွဲသူအများစုရဲ့ ထောက်ခံမှု ရထားတာတဲ့ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးက သင်လက်မလွှတ် သင့်တာ အမှန်ပါပဲ..
>>>>>>Download Camera360 Ultimate<<<<<<
Clean Master (Cleaner) v4.0.0.694 (Android ဖုန်းလေးနေရင် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့ သုံးကြည့်ပါ)
05:48 andriod နည်းပညာ, andriod ဆောဝဲ No comments
Clean Master လေးက Andriod ဖုန်းတွေမှာ အရမ်းကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ Junk File Cleaner, Privacy, Tasks Cleaner, App Manager အစရှိတဲ့ Functions4မျိုးပါ ပါတယ်။ ဖုန်းအတွက် Cleaner ကောင်း ဖြစ် တဲ့ ဆောဝဲလေးတခုပါ။ အရမ်းကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ December 14, 2013 မှအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Update လေးပါ။ အရင် Version ထက်ပိုလန်းပါတယ်။ ပုံစံနဲနဲပြောင်းသွားပါတယ်။
ဖုန်းထဲက ဆောဝဲတွေ Uninstall လုပ်ရင် ဆောဝဲ တွေ ကတော့ထွက်ပြီး Junk File တွေ System ထဲမှာ ကျန်နေပါတယ်။ System ထဲမှာ ကျန်နေတဲ့ Junk File တွေ ကို Clean Master လေးက ရှင်းပေးပါတယ်.။ ထို့အပြင် Root ထားတဲ့ ဖုန်းဆိုရင် System App တောင် Uninstall လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ အရမ်းကို အ သုံး ၀င်ပါတယ်။
ဖုန်းလေးအမြဲ ပေါ့ပါးဖို့ ဒီဆောဝဲလေးကလည်း တဖက်တလန်း အထောက်ကူ ပြုပါ တယ်။ Andriod Version 2.1 အထက်တွေမှာ သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ Andriod ဖုန်းသုံးသူတိုင်း တကယ်ဆောင်ထား သင့်ပါတယ်။
သဘောကျတယ်ဆိုရင် ဒွေင်းနိုင်ပါပြီး ။။။။
>>>>>>Download Clean Master<<<<<<
Activated ဖြစ်ပီးသား Ashampoo ® Burning_Studio_V 14.0.1.12_
07:09 ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲလ် No comments
Activated ဖြစ်ပီးသား Ashampoo ® Burning_Studio_V 14.0.1.12_ လေးကတော့ CD/DVD ဖိုင်တွေကို Burn နိုင် တဲ့ ဆော့ဝဲလ် လေး ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်းထားတဲ့ သူငယ်ချင်း ရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခွေကူးတာ တခုထဲ မဟုတ်ပဲ DVD Slite Show စတာတွေ ကို လိုသလိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ အနော်လည်း အစမ်း သုံးကြည့်တာ တော်တော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်။
>>>>>>Download Ashampoo ® Burning Studio 12<<<<<<
>>>>>>Download Burning_Studio_V 14.0.1.12_<<<<<<
07:41 andriod ဆိုင်ရာ, andriod နည်းပညာ, andriod ဆောဝဲ No comments
ကွန်ပျူတာ အဘိဓာန်ကို ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲသူများနှင့် အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာကို ယခုမှ စတင် လေ့လာသူများ အတွက် ရဥ၁်ရွယ်၍ အထူး ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေါဟာရ တစ်လုံးချင်းစီကို ရိုးရှင်း လွယ်ကူစွာ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ ဝေါဟာရပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ့် ဝေါဟာရများကို စုစဥ၁်းထားခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေ ချောမွတ်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
>>>>>>Download ကွန်ပျူတာ အဘိဓာန်<<<<<<
Wondershare MobileGo , Moborobo တို့ထက်ရေလည်လန်းတဲ့ Mobogenie All In One Android PC Manger Software လေးပါ။
05:55 andriod ဆိုင်ရာ, andriod နည်းပညာ, andriod ဆောဝဲ No comments
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ IT Bank Site က စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Software လေးကတော့ Mobogenie All In One Android PC Manger လေးပါပဲ။သူကတော့ Android Phone နဲ့ Tablet တော်တော်များများကို PC ပေါ်ကနေ Apk File များကို Install ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း Photo များ Music များ Video များကို PC ကနေတစ်ခါတည်းထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း Google Play က Application များ Game များကို PC အတွင်းသို့ တစ်ခါတည်း Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ကာတစ်ခါတည်း Install ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ဖုန်း Contact တွေကို Backup/Restore အဖြစ်ရယူသိမ်းဆည်းနိုင်ခြင်း ဖုန်းအတွက် Wallpaper များကို မိမိ စိတ်ကြိုက်ပုံကို ရွှေးချယ်၍ Download ရယူနိုင်ခြင်း ဖုန်းအတွက် Ringtone များကိုလဲ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် Download ရယူနိုင်သလို မိမိ ဖုန်းအတွင်းက SMS/Massage တွေကို Backup သိမ်းဆည်းထားလို့ရပါသေးတယ်ဗျာ။Wondershare Mobile Go တို့ Moborobo တို့လို Serial Number တို့ Crack တို့မတောင်းပဲ Free Version ဆိုတော့ တော်တော်လေးလန်းတဲ့ Software လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။မသိသေးတဲ့ သူတွေ ရှိနေသေးလို့ ကျွန်တော်က IT Bank စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။အောက်က ပုံလေးတွေကတော့ Screen Short လေးတွေပါဗျာ။Download ရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link လေးမှာ သွားယူလိုက်ပါနော်။
ref ; http://welcometoitbank.blogspot.com
အဲ့ဒီ Software လေးအကြောင်းကို အသေးစိတ် ဒီထက် သိချင်တယ် လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Offical Web Site လိပ်စာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Mobile Phone မှတစ်ဆင့် Internet မလိုအပ်ဘဲ Offline အနေနဲ့မိမိ Facebook Wall ပေါ်သို့ Status များတင်လို့ရနေပါပြီ။(Only Myanmar)
04:26 နည်းပညာများ No comments
အခု ကျွန်တော့ IT Bank Site က စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ Post လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ Mobile Phone(Smart Phone) ထဲကနေ မိမိ Facebook Wall ပေါ်ကို မိမိတင်ချင်တဲ့ စာသားတွေ Status တွေကို Internet မလိုအပ်ဘဲ Offline အနေနဲ့ SMS စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး တင်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် MMstatus(Myanmar Status) ဆိုတဲ့ Mobile Service တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေဗျာ။အဲ့ဒီ Mobile Service ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရတယ်။ဘာတွေ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် လေ့လာထားသလောက်လေး ကျွန်တော့ IT Bank က စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေကို ရှင်းပြပါ့မယ်ဗျာ။အဲ့ဒီ MMstatus SMS စနစ်သုံး Mobile Service ကိုစတင်လိုက်တဲ့ Company ကတော့ M188 Mobile Application Services Center မှ March မတ်လ 12 ရက်နေ့မှာ စတင်ကာ ဖန်တီးပြုလုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ Mobile Phone ကနေတစ်ဆင့် Offline အနေနဲ့ မိမိ Facebook Account ပေါ်သို့ တင်လိုသော Status များကို ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန် မိမိစိတ်ကြိုက်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး SMS (18880) သို့ မိမိတင်လိုသောစာသားများကို ပေးပို့ပြီး အလွယ်တကူ Offline မှနေ Update ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။SMS ပေးပို့ပြီး မိမိရဲ့ Facebook Status တင်တဲ့ အခါမှာလဲ SMS Server အနေနဲ့ပေးပို့သူရဲ့ Password ကို Save မှတ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒီ စနစ်မှာအသုံးပြုရာတွင်လဲ အတွက် Mobile Phone ဘယ်ဖုန်းမဆို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့ M188 Mobile Application Services Center မှ Assistabt Manger ကိုရဲမြတ်အောင် က ပြောပါတယ်။Facebook မှ Notification များကိုလည်း SMS စနစ်ဖြင့် အခမဲ့ပြန်လည်ပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ SMS စနစ်သုံး MMStatus ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ Mobile Phone ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Phone Bill ထဲကမှ တစ်ရက်ကို 35 ကျပ်နှုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အခု လက်ရှိအချိန်မှာတော့ MMstatus ကို အခမဲ့ တစ်လ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။SMS စနစ်သုံး MMstatus(Myanmar Status) နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အချက်အလက်နဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
မေး ဘယ်ဖုန်းတွေက mmStatus သုံးလို့ မလဲ
ဖြေ ဘယ်ဖုန်းအမျိုးစားမဆို SMS ပို့နိုင်/လက်ခံ နိုင်တယ်ဆိုရင် mmStatus ကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
မေး Smart Phone ရှိနေပြီးသားဆို ဘာလို့ ဒီ service ကို သုံးမှာလဲ
ဖြေ mmStatus ဟာ SMS ကိုပဲ အသုံးပြုတဲ့အတွက် အင်တာနက် မရှိတဲ့နေရာတွေမှာလဲ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး notification တွေအတွက် အ၀င် SMS က အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး အသုံးပြုခက ဘယ်လောက်လဲ? ပို့သမျှ SMS ခတွေကို ပေးရမှာလား
Service အသုံးပြုခက တစ်နေ့ကို ၃၅ ကျပ်ပါ။ တစ်နေ့ကို ကြိုက်သလောက် mmStatus update တွေ တင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဖုန်းပေါ်ကနေ ပို့ခကတော့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက သတ်မှတ် ထားတဲ့ နှုန်းထား အတိုင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ကောက်ခံပါလိမ့်မယ်။ Notification တွေအတွက် အ၀င် SMS ကတော့ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ အသုံးပြုခ ကောက်မှာလဲ
ဖြေ အသုံးပြုသူရဲ့ ဖုန်းထဲက credit ကို နေ့စဉ် ၃၅ ကျပ်စီ ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ အသုံးမပြု ချင်တော့ရင် 18880 ကို STOP MMFB ဆိုပြီး ပို့လိုက်ပါ။ mmStatus ဟာ status တင်ရုံတင် မဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ Facebook ကမိတ်ဆွေများရဲ့ Status တွေကိုပါ SMS ကတဆင့် လက်ခံရှိမှာပါ။
မေး Service ကို ယူထားပြီး mmStatus ကနေတဆင့် Facebook Status ကို update မလုပ်ရင်လဲ အသုံးပြုခ ကောက်မှာလား
ဖြေ ဟုတ်ကဲ့။ တစ်နေ့ကို ၃၅ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ပုံမှန်ကောက်ခံသွားမှာပါ။ mmStatus ဟာ status တင်ရုံတင် မဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ Facebook ကမိတ်ဆွေများရဲ့ Status တွေကိုပါ SMS ကတဆင့် လက်ခံရှိမှာပါ။
မေး Service ကို ယူထားပြီးပါပြီ ဒါပေမယ့် SMS တစ်စောင်မှ ၀င်မလာဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ
အသုံးပြုသူရဲ့ password ကမှားနေတာ သို့မဟုတ် register လုပ်လို့မပြီးသေး တာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ အသုံးပြုသူရဲ့ ဖုန်း SMS ဟာ ပြည့်နေတဲ့အတွက် SMS အသစ်တွေ မ၀င်နိုင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မေး “Cannot register due to security issue” ဆိုတဲ့ SMS ၀င်လာပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ
ဖြေ အသုံးပြုသူရဲ့ password ကမှားနေတာ သို့မဟုတ် register လုပ်လို့မပြီးသေးတာကြာင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Facebook account ကို ဒီ page မှတဆင့် ဒါမှမဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် www.mmstatus.com/wap မှတဆင့် ၀င်လိုက်ပါ။ သင်ရဲ့ login အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။ အကယ်လို့ ဖုန်းမှတဆင့် အကူအညီ လိုအပ်ပါက 012399188 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
မေး mmStatus နဲ့ Facebook account ကို register လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။ အခု status ကို ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲ
ဖြေ 18880 ကို SMS ပို့လိုက်ရုံပါပဲ။ ပေးပို့ရမယ့် ပုံစံကတော့ WALL လို့ရိုက်ပါ ပြီးရင် Space (နေရာလွတ်) တစ်ချက်ထားပါ၊ ပြီးရင် တင်ချင်တဲ့ စာသားကိုရေးပါ။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ 18880 ကို ပို့လိုက်ပါ။ ဥပမာ WALL Whatabeautiful day လို့ 18880 ကိုပို့လိုက်ရင် သင့်ရဲ့ status ကို Whatabeautiful day လို့ mmStatus က တင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး mmStatus service က Facebook မှာ Status တင်တာအပြင် တခြား ဘာ ၀န်ဆောင် မှုတွေ ပေးသေးလဲ
ဖြေ mmStatus က သင့်ရဲ့ Facebook အသိမိတ်ဆွေများရဲ့ News Feed ကို လဲ SMS မှတဆင့် သင့်ဆီကို ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ service ကို ယူချင်တယ်ဆိုရင် 18880 ကို FEED လို့စာရိုက်ပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါ။
မေး အခုအထိ mmStatus က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ နားမလည်သေးဘူး။ ကူညီပါဦး
ဖြေ mmStatus ရဲ့ Hotline ဖြစ်တဲ့ 012399188 ကိုဆက်ပြီး သင်တို့ သိလိုတဲ့ အကူအညီ များကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ mmStatus ရဲ့ Facebook Page နဲ့ www.mmstatus.com မှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
SMS စနစ်သုံး MMstatus(Myanmar Status) ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို လေ့လာပြီး အသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့........
MMstatus ရဲ့ Facebook Fan Page ဖြစ်တဲ့ ~ https://www.facebook.com/mmfstatus
MMstatus ရဲ့ Offical Web Page ဖြစ်တဲ့ ~ http://www.mmstatus.com တို့မှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
MMstatus ကိုအသုံးပြုသူ အနေဖြင့် Facebook ပေါ်တွင် Status များအား Update ပြုလုပ်ချင်ပါကမိမိ Mobile Phone များမှတစ်ဆင့် မိမိတင်လိုသော် Status ကို MMStatus Server (18880) သို့အရင်ဦးဆုံး SMS ရိုက်နှိပ်ပြီး ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။MMstatus Server (18880) မှာ မိမိပေးပို့လိုက်တဲ့ SMS ကိုလက်ခံရယူကာ Facebook ပေါ်သို့ Update တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အသုံးပြုခကတော့ တစ်နေ့ကို မြန်မာကျပ်ငွေ 35 ကျပ်တည်းဖြင့် မိမိ စိတ်ကြိုက် MMstatus ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်က ကြော်ငြာပေးသလို ဖြစ်သွားတယ်နော်။ထားပါတော့ဗျာ..။ဒီ SMS Service လေးက Internet မလိုလဲ အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော့ IT Bank စာဖတ်ပရ်ိတ်တွေထဲက မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Mobile Phone အသုံးပြုသူတွေအားလုံးအတွက် ပျော်စရာသတင်းကောင်းလေး ပါးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ref ; http://welcometoitbank.blogspot.com/2013/03/mobile-phone-internet-offline-facebook.html
03:44 andriod ဆိုင်ရာ, andriod နည်းပညာ, andriod ဆောဝဲ No comments
>>>>>>Download Built In<<<<<<
ref ; http://www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com/?p=9153
Android မြန်မာ-ထိုင်း အခြေခံစကားပြော
03:42 andriod ဆိုင်ရာ, andriod နည်းပညာ, andriod ဆောဝဲ No comments
ထိုင်းနိုင်ငံသို့အလည်အပတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား/သူများအတွက် အခြေခံထိုင်းစကားကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာတတ်မြောက်စေရန်ရည်ရွယ်ရေးသားပြုစုဖန်တီးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ထိုင်းစကားနှင့်မရင်းနှီးသေးတဲ့သူမအတွက်အခြေခံထိုင်းစကားတတ်မြောက်လာစေဖို့အထောက်အပံ့ တစုံတခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်..ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ...လေ့လာသူအတွက် လွယ်ကူစေရန် မိမိရွေးချယ်တဲ့စကားလုံးကို -မြန်မာ-ထိုင်း၂ဘာသာနဲ့ရေးပြထားပါတယ်...
အနှေး/အမြန်၂မျိုးနဲ့ရွတ်ပြပေးအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်.(ဒုက္ခခံ ရွတ်ပြပေးရှာတဲ့ ယိုးဒယားမလေး အသံက ချိုနေတာဘဲ၊ချစ်စရာလေး)မိမိကျွမ်းကျင်မှု့-အစမ်းလေ့ကျင့်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းအစီစဉ်လဲ-တပါတည်းပါရှိပါတယ်..ခင်ဗျာ။
မြန်မာလူမျိုးအများစုက ဖုန်းသာကိုင်တာ ပါ။ သေသေချာ ချာတော့မလေ့လာပါဖူး... ဒါပေမယ့်လေ့လာလို့၇အောင် အလိမ်မခံ၇အောင် ဒါလေး တင်ပေးတာပါ။...
samsung မြန်မာဖောင့် နှင့် ကီးဘုတ် (for android)
sumsang androiod အတွက် မြန်မာဖောင့်နှင့်ကီဘုတ်တွေ ပါ.... လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ယူသွားကြပါ စုစုပေါင်း ( ၄ ) မျိုးတင်ပေးလိုပ်ပါတယ်...
YTD (YouTube Downloader) apk. andriod ဖုန်းအတွက် Video Downloader ဆော့ဝဲလ်
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ YouTube မှာ Video ဖိုင်များကို အလွယ်တကူ ဒေါင်း ယူလို့ရနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလ် လေးဖြစ်ပါတယ် သုံးဖူးတဲ့လူတွေတော့သိကြမှာပါ မသုံ...
ထိုင်းနိုင်ငံသို့အလည်အပတ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်လုပ်ဖို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား/သူများအတွက် အခြေခံ ထိုင်းစကားကိုအချိန်တိုအတွင...
Real Football 2014 android game
ဘော်လုံးပွဲဝါသနာရှင်တွေအတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့ game လေးပါ ရုပ်ထွက်တာလည်း တကယ့် ကွင်းမှာကြည့်နေရသလိုပါပဲ game ဆိုဒ် ကတော့ ကြီးပါတယ်။ အောက်မ...
ဖေ့ဘွတ် မှာ gif ဖောမတ် နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံ တင်နည်း
ဖေ့ဘွတ်ကို Gif ပုံတွေတင်တာ နည်းလမ်းများစွာ ရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်သိတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး ဒီလင့်လေးကို သွားလို...
Wondershare DVD Creator 2.6.5.32 With Registration...
Camera360 Ultimate v 4.8.1 for android (12,18,2013...
Clean Master (Cleaner) v4.0.0.694 (Android ဖုန်းလေ...
Activated ဖြစ်ပီးသား Ashampoo ® Burning_Studio_V 1...
Wondershare MobileGo , Moborobo တို့ထက်ရေလည်လန်းတဲ...
Mobile Phone မှတစ်ဆင့် Internet မလိုအပ်ဘဲ Offline ...
Live TV HD ( Astro မှ လွင့်သော လိုင်းပေါင်း ၁၀၀ ကေ...
andriod ဆိုင်ရာ (33)
andriod နည်းပညာ (36)
andriod ဆောဝဲ (41)
Android Root နည်း (1)
android ဂိမ်း (8)
mobile ဆိုင်ရာ (4)
Mon Font and keyboard (1)
nokia နည်းပညာ (2)
nokia ဆောဝဲ (3)
ကွန်ပျူတာ ဆော့ဝဲလ် (5)
ဖလက်ဆိုင်ရာ ဆောဝဲ (4)
မိုးဇက် mobile app (1)
ပြည်တွင်း mobil ဖုန်းသတင်း (5)
မောင်စည်မိုး (နည်းပညာ) (မှ) နည်းပညာပြန်လည်မျှဝေခြင်း
မျက်စိလည်ပီးတော့ အလည်ရောက်လာကြတဲ့ ခရီးသည်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူ့တင်ရှိပါကြောင်း......(မိုးဇက်)...... - | |